Andao hahazo vola: Fomba 8 hanodinana ny fifamoivoizana amin'ny haino aman-jery sosialy amin'ny varotra | Martech Zone
Zoma, Aogositra 17, 2018 Alatsinainy Oktobra 18, 2021 Anna Bredava
Ny varotra amin'ny haino aman-jery sosialy no faniriana vaovao ho an'ireo manam-pahaizana momba ny varotra manerana an'izao tontolo izao. Mifanohitra amin'ny finoana efa lany andro, ny varotra media sosialy dia mety hahasoa amin'ny indostria rehetra - tsy maninona na ny milliennial na ny taranaka X, ny mpianatra na ny tompona orinasa, ny fixer, na ny mpampianatra eny amin'ny oniversite no kendrenao. Mihevitra ny zava-misy fa misy 3 miliara mpampiasa media sosialy eran-tany, afaka milaza marina ve ianao fa tsy misy olona maniry hividy ny vokatrao eo aminy? Ny asanao dia ireto olona ireto.
Raha ampitahaina amin'ny marketing nentim-paharazana dia manana tombony maro ny varotra media sosialy - ity fantsom-pifandraisana ity dia mora vidy ary hita ho azo itokisana sy azo itokisana kokoa, izay mahatonga azy io ho tonga lafatra amin'ny fiovam-po. Tsy mila mandray ny teniko ianao fa jereo hoe ohatrinona mandany marketing amin'ny haino aman-jery sosialy ny orinasa. Ka ahoana no tena ampiasanao ny media sosialy hahazoana tombony?
Fakafakao ny fizotry ny varotrao
Ny fikarohana dia ny Holy Grail an'ny marketing - tsy afaka mivarotra na inona na inona ianao raha tsy azonao tsara ny fihetsiky ny olona maniry ny hividy ny vokatrao ary handray fanapahan-kevitra. Izany no antony, voalohany indrindra dia mila mandinika ny fizotry ny varotra ao ambadiky ny fantsom-pivarotanao ianao.
Ny fanontaniana tokony apetrakao amin'ny tenanao mba hamakafaka ny fotoana fivarotana media sosialy dia:
Iza fantsona mitondra fitarihana mankany amin'ny fantsonao ve izao?
Inona ny fizotry ny varotra?
Ohatrinona fotoana mila manakatona ny fifanarahana ve izany?
Mety hahagaga anao ny valin'ireto fanontaniana ireto: angamba ho hitanao fa nifantoka tamin'ny sehatra diso ianao nandritra izay rehetra izay. Amin'ity tranga ity dia mety ho hitanao fa mahasoa ny manao fikarohana kely natokana amin'ny fisafidianana ny sehatra media sosialy tsara indrindra ho an'ny orinasanao.
Azonao atao izany amin'ny alàlan'ny fanarahana ny hetsika haino aman-jery sosialin'ny mpifaninana aminao sy ny mahita hoe iza amin'ireo sehatra no sarobidy indrindra amin'izy ireo, saingy misy fomba mahomby sy kanto kokoa hanaovana azy. Ny zavatra ilainao dia fitaovana fihainoana ara-tsosialy toy ny Awario. Amin'izany dia azonao atao ny manara-maso ny teny rehetra momba ny teny lakile amin'ny media sosialy sy ny tranonkala amin'ny fotoana tena izy.
Andao lazaina fa manao SaaS ho an'ny fanombohana ianao - apetrakao fotsiny ny "fanombohana" ho iray amin'ireo teny lakileo ary ho hitanao hoe iza amin'ireo sehatra no miresaka bebe kokoa ary, noho izany, fifanakalozan-kevitra bebe kokoa mihatra amin'ny vokatrao. Amin'izay dia ho azonao ny toerana misy ny mpihaino kendrenao ary ataovy lohalaharana ireo fantsona mifandraika amin'izany.
Ataovy ao an-tsaina fa amin'ny media sosialy, matetika ianao no mahatratra ireo mety ho mpividy eo am-panatanterahana ny varotra: ankehitriny ny fizarana fahatsiarovan-tena amin'ny marika dia mizara telo (fanala baraka, fitaomana ary fifamatorana). Midika izany fa mila mamolavola ny paikadin'ny varotra media sosialy mifanaraka amin'izany ianao.
Araho maso sy ampirisiho ny hevitra momba ny haino aman-jery sosialy
Mifarana ny vanim-potoanan'ny dokam-barotra nentim-paharazana - namerina ny fomba mahomby indrindra hitaomana ny fitondran-tena mividy olona ny media sosialy. Manontany tena ianao hoe inona izany? Teny vava izany. Raha ny marina, araka ny Nielsen, 92% ny olona tolo-kevitra momba ny fifampitokisana avy amin'ny namana sy fianakaviana amin'ny endrika marketing hafa rehetra, ary 77% ny mpanjifa dia mazàna mividy vokatra vaovao rehefa mianatra momba izany amin'ny namana na fianakaviana. Ara-dalàna raha misafidy ny hatoky olona fantatrao mihoatra ny marika ianao.
Ny haino aman-jery sosialy dia toerana mety indrindra amin'ny marketing amin'ny referral: ireo sehatra rehetra ireo dia natao hamela antsika hizara traikefa sy zavatra hita mahatalanjona amin'ireo namantsika. Ka ny tokony hataonao hahazoana vola amin'izany dia ny famporisihana ny olona handefa ny zavatra niainany. Azonao atao aza ny manolotra insentif kely ho azy ireo, toy ny fihenam-bidy kely na santionany.
Aza adino ny mamaly ny hevitra rehetra, na ny tsara sy ny ratsy. 71% ny mpanjifa izay manana traikefa amin'ny serivisy serivisy tsara miaraka amin'ny marika dia mety hanolotra izany amin'ny hafa. Ny fidirana an-tserasera amin'ny haino aman-jery sosialy mavitrika avy amin'ny lafiny marika dia miteraka fifandraisana eo amin'ny marika sy ny mpanjifa ary mahatonga azy ireo hahatsapa fa henoina, izay tena zava-dehibe amin'ny fitazonana.
Raiso ny varotra sosialy
Tsy ny olona ihany no te hizara ny eritreriny momba ny marika amin'ny media sosialy, fa matetika koa izy ireo dia mitodika any amin'ny media sosialy mba hahazoana tolo-kevitra. Eo dia efa manana ny mety hitarika anao - mila mamantatra azy fotsiny ianao. Azonao atao ny mahita azy ireo amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso ireo vondrom-piarahamonina mifandraika toy ny vondrona Facebook, subreddits, chat amin'ny Twitter sns. Azonao atao koa ny mampiasa fitaovana fihainoana ara-tsosialy ho an'izany, fa alao antoka fa misy itovizany Fomba fikarohana Boolean, izay ahafahanao manamboatra ny fangatahanao mba hahafahanao hanao ny fikarohana sy ho feno amin'ny fotoana iray.
Raha dinihina ny zava-misy fa amin'ny tranga maro dia hamaly olona tsy fantatra ianao izay tsy naseho tamin'ny marika taloha, dia mandany andro. Aza miditra ao aminy miaraka amin'ny sehatra fivarotana tsy misy fientanam-po - mametraha fanontaniana, hazavao ny fomba mety hahazoan'izy ireo tombony amin'ny vokatrao, ny fampiasana feo sy feo mifanaraka amin'ny sehatra sy ny fangatahan'izy ireo, ary hahatonga ity fifanakalozana ity hisy dikany sy tena izy. Amin'ity fomba ity dia mety hisy fiantraikany bebe kokoa amin'ny fanapahan-kevitr'izy ireo noho ny fandefasana hafatra fanapahana cookie amin'ny làlana hitanao rehetra. Ary mazava ho azy, ataovy mora ho azy ireo ny mividy - omeo rohy izy ireo, izay mitarika mivantana amin'ny vokatra.
Hatsarao ny làlan'ny fampitam-baovao sosialy mankany amin'ny fiovam-po
Raha miresaka rohy dia tena zava-dehibe izy ireo. Izahay mpanjifa kamo izay matetika milazaina amin'ny fomba sy ny toerana hividianana ny vokatra tadiavina. Raha tsy afaka manindry rohy mankamin'ny tranonkalanao avy hatrany fotsiny ny mpanjifa mety, dia azo inoana fa tsy hanelingelina azy ireo hikaroka azy ireo.
Ny tokony hataonao dia ny mametraka rohy ao amin'ny tsirairay amin'ireo mombamomba anao ary hampiharihary azy ireo. Raha mandefa lahatsoratra fampiroboroboana ianao - apetraho ny rohy iray, raha manonona fotsiny ny iray amin'ireo vokatrao ianao - mametraha rohy koa ao. Na dia mamaly ireo fanondroana aza, izay efa noresahintsika teo aloha, dia azonao atao ny mametraka rohy mankany amin'ny vokatra iray izay resahina.
Mila ataonao milamina araka izay azo atao ny lalana mankany amin'ny fiovam-po.
Avereno jerena ny pejin'ny fizarana haino aman-jery sosialinao
Rehefa mahazo fitarihana ianao dia tianao ho azo antoka fa iray monja miala amin'ny fiovam-po izy ireo. Mampalahelo ny mamorona tetikady fivarotana haino aman-jery sosialy mahagagaga raha tsy mijanona amin'ny dingana farany ny varotra. Izany no antony ilanao pejy fitandremana tonga lafatra izay handresy lahatra ny mpanjifanao mety handray fanapahan-kevitra momba ny fividianana. Ireto misy zavatra vitsivitsy izay tsy tokony hohadinoinao hamerina ny pejy fitorianao:
Haingam-pandeha. Tsy kamo fotsiny ny mpanjifa, tsy manam-paharetana koa izy ireo (azafady, mpanjifa!). Manantena ny hamoahana ny pejinao izy ireo 3 segondra, fa ny salan'isan'ny fotoana fandefasana azy dia 15. Ka alao antoka fa tsy mila miandry izy ireo!
Fohy sy tsotra. Tsy ilaina ny mitanisa ireo antony tokana rehetra mahatonga ny vokatrao ho tsara indrindra amin'ny antsipiriany rehetra. Tsy te-hanelingelina ny mpanjifanao mety amin'ny fampahalalana fanampiny rehetra ianao. Ataovy tsotra sy madio ilay hafatra ary apetaho amin'ny takelaka mora takarina ny fampahalalana fanampiny - dia izay.
Fanindroany, fahatokisana sy referraly Mba hamenoana ny fiovam-po dia mila fahatokisan'ny mpanjifa ianao. Ny fahatokisana dia tena zava-dehibe amin'ny fanapahan-kevitry ny mpividy. Hamarino tsara fa manana ny fijoroana vavao na ny fiorenan'ny mpanjifa ianao amin'ny haavon'ny masonao amin'ny iray amin'ireo sisin-tany na amin'ny lohateny - any amin'ny toerana iray dia ho hitan'izy ireo haingana izany nefa tsy mila mihetsika.
Manaova fiovam-po malefaka
Araka ny efa noresahintsika, ny fidirana amin'ny media sosialy dia miditra aloha any amin'ny fantson'ny varotra noho ny fitarihana nentim-paharazana. Noho izany antony izany dia mety tsy vonona handray fanapahan-kevitra momba ny fividianana izy ireo, saingy tsy midika izany fa azonao atao tsirambina izy ireo.
Eto ianao dia afaka mamorona fotoana mety amin'ny fiovam-po malefaka. Fomba mahazatra hanaovana azy ny manolotra famandrihana mailaka. Mazava ho azy, tokony hanamarina izany amin'ny mpanjifa ianao amin'ny fanomezana azy ireo atiny mampiala voly sy sarobidy. Ny fanaovana atiny mahaliana izay mampiseho ny fomba fiasan'ny vokatrao (fampianarana sy fandinihana tranga) dia fomba iray lehibe hanovana ireo fitarihana malefaka ireo ho lasa mpividy.
Fironana vaovao mipoitra izao marketing amin'ny mpitondra hafatra, noho izany, raha tokony mangataka amin'ny olona hisoratra anarana amin'ny mailakao ianao dia afaka mangataka alalana fotsiny handefa hafatra amin'izy ireo. Voaporofo fa mazàna mamaky hafatra amin'ny media sosialy ny olona noho ny mailaka. Ny fandinihana dia mampiseho fa ny fampiharana fandefasan-kafatra dia manana sanda misokatra, tahan'ny vakiteny ary CTR hatramin'ny 10X an'ny mailaka sy SMS. Ankoatr'izay, mahatratra azy ireo eo amin'ny toerana nahitan'izy ireo voalohany ny marikao ianao - tao amin'ny media sosialy.
Ampidiro ny antso-ho-hetsika matanjaka
Raha tsy mangataka na inona na inona ianao dia tsy hahazo na inona na inona. Na dia indraindray mety ho toa manintona loatra aza ny fiantsoana andraikitra, paikady tena mandaitra izany raha ataonao tsara.
Ny CTA anao dia tokony ho mazava sy mifandraika amin'ilay paositra - amin'ity fomba ity dia toa voajanahary sy mety izany. Mety fanasana ny hametraka fanehoan-kevitra ary hizara ny eritreriny, hianatra bebe kokoa momba ny lohahevitra, na famporisihana hividy ny vokatrao. Ny fampidirana CTA amin'ny pejinao Facebook dia mety hampitombo ny taha-tsindry hatramin'ny 285%. Aza adino ny maka antoka fa raha mampiditra rohy ianao dia hamboarina ho takalon'ny fiovam-po eo no ho eo ny pejinao.
Manolora fanararaotana ara-tsosialy
Rehefa dinihina tokoa, ny fomba tsara indrindra ahazoana mpanjifa vaovao dia ny manolotra zavatra manokana ho takalony - tian'ny olona ny fahatsapany fa anisan'ny vondrona voafidy izy ireo. Ny fomba mibaribary indrindra hanaovana an'io dia ny manolotra fihenam-bidy ho an'ny mpanaraka anao - mety tsy ho vitanao matetika izany, fa amin'ny fifanarahana indray mandeha hahasarika fitarihana vaovao dia majika io.
Ny fomba famoronana (sy mora kokoa) dia ny fanaovana fifaninanana eo amin'ireo mpanaraka anao. Ohatra, BeardBrand dia afaka nampitombo ny fisiany ara-tsosialy tamin'ny 300% ary nitombo avo roa heny ny lisitry ny mailaka tao anatin'ny iray herinandro latsaka tamin'ny fifaninanana an-tserasera voadinika tsara. Azonao atao ny mangataka amin'ny mpanaraka anao hizara sy hamerina handefa ny hafatrao na hamorona ny atiny manokana miaraka amin'ny vokatrao na serivisinao ao. Mamono vorona roa miaraka amin'ny vato iray ianao - mahazo fisondrotana bebe kokoa sy mpanaraka ary koa manangona atiny ateraky ny mpampiasa azonao ampiasaina amin'ny varotra media sosialy sy amin'ny fampielezana varotra nentim-paharazana amin'ny ho avy.
Tags: volombavafikarohana booleanfomba fikarohana booleanlalan'ny fiovam-poVondrona Facebookmpanampy rohymarketing amin'ny mpitondra hafatrany volafanehoan-kevitra ara-tsosialyhaino aman-jery sosialypejy fandrakofana media sosialylalan'ny media sosialy mankany amin'ny fiovam-pofidiram-bola amin'ny media sosialyvarotra amin'ny media sosialyfivarotana ara-tsosialyfiovam-po malefakasubredditschat ao amin'ny twitter
Sitelock: Arovy ny tranokalanao WordPress sy ireo mpitsidika anao
Hypernet: kitiho ny fahefa-miasa momba ny fanaparitahana latsa-danja na mivarotra ny anao